हाम्राे पिपलबाेट » नेपाली काँग्रेसको गाईजात्रा कहिले सम्म हो ? नेपाली काँग्रेसको गाईजात्रा कहिले सम्म हो ? – हाम्राे पिपलबाेट
नेपाली काँग्रेसको गाईजात्रा कहिले सम्म हो ?
बाँकेका स्थानिय तहमा पनि गाइजात्रा
वी.पी. कोईरालाले स्थापना गरेको नेपाली काँग्रेस अहिले यता न उताको भएको अनुभव गर्न थालेका छन् काँग्रेस कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरु । राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसको प्रभुत्व र प्रभावमा देखिएको विषम परिस्थिती र वर्तमान अवस्थामा संसारभर नै त्रासमय रुपमा फैलिदै गएको कोरोना कहरसँग सम्बन्धित रहेर संकटको समयमा जनतालाई साथ कसरी दिन सकिन्छ त्यता तिर नेपाली काँग्रेसको ध्यान गएको देखिदैन । नेपालीका पछिल्ला गतिविधीहरुलाई गाईजात्रासँग तुलना हुन थालेको आभास हुनथालेको छ ।
पार्टीको विधान, विधी र पद्वतीको दायित्वबोध पार्टीमा हुनेहो भने वास्तवमै नेपाली काँग्रेसको शाख अर्कै हुनेमा दुईमत छैन । नेपाली काँग्रेस बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जिल्लाको राजनीति आफैमा एउटा गाईजात्राको रुप हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । बाँके जिल्लामा एक उपमहानगर पालिका ,एक नगरपालिका र छ वटा गाउपालिका रहेका छन् । आठ स्थानिय निकाए मध्ये दई वटामा मात्र नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा स्थानिय सरकार वनेको छ । अन्य छ वटा स्थानिय तहमा भने काँग्रेसले स्थानिय निर्वाचनबाट नेतृत्वबाट चुक्नुप¥यो । नेपालगञ्ज उप महानगरपालिकामा उप प्रमुख र नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उप प्रमुखहरु निर्वाचित भएका छन् । राप्ती सोनारी गाँउ पालिका भौगोकि रुपमा देश कै सवै भन्दा ठुलो गाउपालिका रहेको छ । यस गाउपालिकाको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका पूर्व जिल्ला उपसभापती लाहुराम चौधरीले गर्नु भएकोको छ । उहाँले नेपाली काँग्रेस र विपिकोविचार अवश्य बुभ्mनु भएकै हुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ । तर उहाँले त्यसको अलवा पाटिले निर्वाचनको समयमा निकालेको घोषण पत्रको वारेमा अनजिज्ञता भएको जसरी काम गरेर अगाडि वढेको देखिन्छ ।
उता डुडुवा गाउ पालिकामा नेपाली काँग्रेसमा सचिवका उमेदवार हुनु भएका एक उर्जाशील, तत्कालीन पाटि सचिवलाई पछि पार्दै गाँउ पालिकाको टिकट लिन सफल काँग्रेसको विपिवादको विषयमा जानकार नेता नरेन्द्र चौधरीलाई निर्वाचित गराउन काँग्रेस सफल भयो तर उहाँले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालमा गरेका कामले प्रष्ट हुन्छ उहाँले बुझेको नेपाली काँग्रेस र विपि विचार । जुन समयमा आवश्यक थियो त्यसबेला कानमा तेल हालेर सुत्नेअनि अन्य समयमा भजन गाएर के हुन सक्छ ?
जिल्लाको महत्वपूर्ण स्थानिय तह नेपालगन्ज उप महानगरपालिकामा उप प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसको उमेद्वार निर्वाचित हुनु भएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य , नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय सदस्य भैसकेकी युवा नेतृ उमा थापा मगरले पनि नेपाली काँगे्रसको विचार नीति र विपि को समाजवाद अवश्य बुभ्mनु भएको नै होला तर नगरवासीहरुले उहाँको कार्यकालमा के पाउन सफल भए, त्यसको परिणाम घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । उप प्रमुख थापाले चुनावी अभियानमा अभिभावका रुपमा सहयात्रा गरेका नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नगर प्रमुखको उमेदवारी दर्ता गरी चुनावी मैदानमा होमिनुभएका डा. सुरेश कुमार कनोडियासंग चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कुन कुन मुद्दाहरुमा छलफल गरेर कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ, यसबारे नगरवासी जानकार हुनै पर्छ तर निर्वाचन पछि डा. कनोडिया र उप प्रमुख थापाकाबीच कुनै संवाद तथथा छलफल भएको पाइएको छैन । निर्वाचनताका चुनावी घोषणा पत्र अहिले कता धमिरो लागेको छ त्यो न नगर काँग्रेसलाई थाहा छ न उप प्रमुखलाई नै । पदवहाली पछि विपिको समाजवाद अनुसारको काँग्रेसलाई मूर्त रुप दिन नसक्नुको पछाडी जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता कस्को होला ? यो आम जनताको मनमा लागेको कुरा हो ।
यता जिल्लाको अर्को विशेष महत्वको स्थानिय तह कोहलपुर नगरपालिकामा पनि नेपाली काँग्रेसकै उप प्रमुख सन्जु कुमारी चौधरी निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो । उहाँ वाके जिल्लामा उमेर र पार्टि मा सवै भन्दा कम लगानी भएता पनि अल्लारे उमेरमा महत्वपूर्ण अवसर पार्टिबाट ग्रहण गर्न सफल हुनुभयो । तर अहिले उहाँले बुझेको नेपाली काँग्रेस कस्तो रहेछ भन्ने कोहलपुरवासी नेपाली काँग्रेसले राम्रो संग बुझन पाएका छन् । उहाँसंग निर्वाचनको समयमा सहयात्री गदै मेयरको चुनाव लड्नु भएका भानु भक्त भट्टराई अहिले कता हुनुहुन्छ ? भट्टराई काँग्रेसको आन्तरिक कलह र उमेद्वारलाई अहसयोग गर्ने काँगैसभित्रको गुटको अन्तरघातका कारण झिनो मतले पराजित भएसँगै उप–प्रमुख चौधरी चुनावी मैदानमा अहोरात्र सहयात्रा गरेका नगर प्रमुखका उमेद्वारलाई हरेक गतिविधीबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक सबै प्रकारका परामर्शहरु लिनुपर्ने हो तर उहाँ यस विषयमा पनि चुकिरहनुभएको छ । उहाले निर्वाचन भए यता मेयरका उमेदवार संग कहिले पनि नीतिगत विषमा छलफल गर्न इच्छाशक्ति कहिले पनि नदेखाउनुको पछाडी सानो उमेरमा परेको राजनीतिक चिट्ठा र अहमता प्रमुख कारण देखिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकामा यसरी देखिन्छ नेपाली काँग्रेसको अहिलेको वर्तमान गतिविधि ।
वडा अध्यक्षहरुको वारेमा कुरा गर्नु पर्ने केहि छैन समय मिलाएर लेख्ने प्रयास गर्ने छु यसको लागी अहिले यहि थाति राख्न चाहान्छु ।
जन निर्वाचितहरुको सवैको पार्टि प्रतिको प्रश्नको उत्तर सवै एउटै रहेको पाईन्छ । त्यो हो हामी अल्पमतमा रहेका छौ । भने जस्तो काम गर्न सकिएन भन्ने भन्दा केहि उत्तर छैन जस्तो लाग्छ ।
उता असली गाईजात्रा देखाउने भनेका काँग्रेसको जिल्ला, क्षेत्र, नगर , गाउँपालिका र वडा समितिहरु हुन् । किन यस्तो भनेर भन्नु होला यसको पहिलो कुरा निर्वाचन अगाडी टिकट दिने समयमा उहाँहरुले गरेको गतिविधि र लेन देन ले गर्दा अहिले उहाँहरु नै केहि भन्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । कतिपय पार्टि नेतृत्व अहिले उनीहरुको जन प्रतिनिधिको दाना पानी वाट आफ्नो जिविकोपार्जन गदै आएको देखिन्छ, यसले गर्दा पनि केहि भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
पर्टिका नेताहरु कहिले पनि सवै काँग्रेस कार्यकर्ताको समस्या र उनीको चाहना बुझ्ने तर्फ लागेको पाईदैन । उनीहरु पार्टि भित्र पनि गुट र उप गुटमा रमाउदै अगाडी वढेको पाईन्छ । साथै उनीहरु अहिले विभिन्न आफ्नै पार्टिका कार्यकर्ता र पार्टिको मर्म र भावना बुभ्mन नसक्नेहरु अहिले तछार मछार गर्दै अन्य पार्टिवाट मान्छे प्रवेस गराउन तर्फ उद्वत रहेका छन् । यसले कसरी वन्छ पाटी ?
नेताहरुमा अहिले देखिएको अर्को ठुलो भुत वनेर आएको छ, क्रियासिल सदस्य भन्ने शव्द । क्रियासिल सदस्य आफ्नो खल्तीमा हालेर क्रियासिल पाउने भए मेरोप छाडि लाग्नु प¥यो अन्यथा दिईन्न भन्न थालेका छन् । यस्तो भन्दा राम्रो जात्रा केही देख्न बाँकी छ, काँग्रेस कायकर्ताले अहिलेको समयमा ? यस किसिमको गाई जात्रा रहदा सम्म नेपाली काँग्रेसले आम निर्वाचन कहिले पनि जित्ने छैन ।
पुराना टोपी लाउनेहरुले वचाएको नेपाली काँग्रेस कहिले सम्म रस चुसेर बस्ने हुन अहिलेका नेतृत्व गर्नेहरु यो आम काँग्रेसीहरुको मनमा रहेको छ । पार्टिमा कहिले पनि उचित मुल्यांकन गर्न सक्ने नेतृत्व आउन सकेको छैन । पार्टि भनेर कुनै जागिर व्यापार नगरी पार्टिमा लागेकाहरुको मुल्यांकन कस्ले गर्ने ? पार्टिले टिकट दिदा पैसा भएका र चुनावका समयमा खर्च गर्न सक्नेहरुलाई टिकट दिन्छ, त्यस्तो भए किन लाग्ने पार्टिको काममा पैसा कमाउने पछि पैसाको भरमा राजनीति गर्न तर्फ लाग्नेहरुको अहिले वढि महत्व देखिन थालेको छ ।
साचिकै नेपालि काँग्रेस वनाउन लाग्नेहो भने क्रियासिल वाढेर र पार्टि प्रवेसको गाई जात्रा देखाएर हैन वरु वडा देखि जिल्ला सम्म सर्व सहमतिको आधारमा नेतृत्व छान्न लाग्ने हो की सच्चा काँग्रेसीहरु ? यस्ता गाई जात्रा देखाउने हरुको विकल्प नै अहिलेको आवश्यकता हो नेपाली काँग्रेसको ।
२८ भाद्र २०७७ मा प्रकाशित